Dawladda Shiinuhu Ma Xakamayn Kartaa Waddanka Kuuriyada Waqooyi?
Thursday August, 16 2018 - 04:12:43
Thursday September 07, 2017 - 09:14:53 in by Burco Office
Jamhuuriyadda shacabka Shiinuhu waa dal leh xidhiidho laba geesood ah oo ku salaysan masuuliyadda la qaado, waxaanu xidhiidh gaar ah oo dhaw la leeyahay dalka yar ee ay dhanka woqooyi bari deriska ka yihiin.
Shiinuhu waa dalka keliya ee la leh Kuuriyada Woqooyi heshiisyo dabar sharci leh oo gargaar uu ku siiyo iyo iskaashi, kuwaas oo la saxeexay bishii Juulaay 1961. Heshiiskaasina wuxu ka kooban yahay todoba qodob oo keli ah.
Qodobka labaad ayaa ugu muhiimsan, waxaanu dhigayaa: "dalalka heshiiskan saxeexay waxay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah u qaadaan tallaabo kasta oo ay kaga hortagayaan gardarro wadan kastaa ku soo qaado labada midkood. Hadii labda dhinac ee heshiiskan saxeexday dal kale ama dalal badan oo wada jiraa midkood weerar hubaysan ku soo qaadaan oo xaalad dagaal timaad, dalka kale waa inuu si dhakhso ah taageero milatari iyo wax kasta oo suurto gal ahba ugu fidiyaa wadanka la soo weeraray”
Dulucdu waxay hadaba tahay, hadii jawaab faahfaahsan laga doonayo isweydiinta ah muxuu Shiinu samayn doonaa hadii Kuuriyada Woqooyi quwad kale weerarto, Maraykanka ama Kuuriyada Koonfureed ba dhahoo, qodobkaa aan xusnay ayaa jawaabtii ku dhantahay.
Sida heshiiskani dhigayo, Shiinaha waxa waajib ku noqonaysa in uu ka qayb galo dagaalkaa oo uu la safto Kuuriyada Woqooyi. Wax kaleba marka laga yimaad, arintani waxay muujinaysaa sida taariikhdu weli u qaabaynayso xidhiidhka labada dal ka dhexeeya.
Dhacdo hore oo loo soo joogay baa jirta. Xataa heshiiskan 1950-kii ay wada saxeexdeen ka hor, Shiinuhu wuxu hal milyan oo ciidankiisa ah geliyey dagaalkii Kuuriya markii ciidamada Qaramada Midoobay halkaa tageen. Kuuriyada Woqooyi waa dal uu Shiinuhu ateero ka dhigto isla markaana ah dal heshiis difaac ka dhaxeeyo, waxaana ka go’an in uu cudud milatari iyo saanad ka culus tii waagaa u diro dalkaas.
Heshiiskaasi weli waa dhaqan gal inkasta oo Shiinuhu si weyn isku bedelay tan iyo markii la saxeexay.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionHal milyan oo ciidamada Shiinaha ah ayaa la saftay Kuuriyada Woqooyi markii dagaalka Kuuriya socday
Geeridii Mao ee sannadkii 1976 ka dib, dalku wuxu ka weecday dhabbihii hantiwadaagga isbididda ahaa oo wuxu u leexday hirgelinta is bedello ballaadhan. Waxaanay arintaasi dhalisay hanaanka gaarka ah ee isku dhafan ee maanta dalkaa lagu hogaamiyo. Dhaqaalaha dalka iyo siyaasadiisa juquraafiyadeed ba kor bay u kaceen oo way xididaysteen.
Hase yeeshee Kuuriyada Woqooyi xaaladeedu sidaa way ka duwan tahay. Isku dayo aan badnayn oo sodonkii sano ee la soo dhaafay lagu damacsanaa in is bedello lagu sameeyo ayaan guulo badan laga gaadhin.
Bilowgii qarnigan ayaa Shiinuhu casuumay hogaamiyihii hore ee Kuuriyada Woqooyi, Kim Kong-Il, waxaanay geeyeen aaggaga gaarka ah ee dhaqaalaha ee ku yaal Shanghai, waxaana la tusay tusaaleyaal ah sida loo abuuro warshado wax soor saar la dhoofiyo yoolkoodu yahay si loola baayac mushtaro dalalka reer Galbeedka ah ee hanti goosadka ah hase ahaatee aan looga tagin hanaanka hantiwadaagga ah.
Isku daygaa lagu doonayey in hogaamiyahaasi wax kaga bedelo fikirkiisa ayaa dhego laydh u daloola ku dhacay. Aragtida gaarka ah ee Kuuriyada Woqooyi ee saldhigga uu u yahay fikirka Juche, oo ah hantiwadaag badhax la’, ayaa noqotay mid aan u dhego nuglayn hanaan meel kale laga soo min guuriyo.
Ilaa maantadan, suuqa dhaqaale ee Kuuriyada Woqooyi waaba haduu jiree, wuxu u qaabaysanyahay oo loo jaangooyey taageerada ciidanka dalka ujeedaduna waa jiritaanka dawladda.
Beryahan arimaha waaweyn ee Shiinaha gacanta sare siinayaa waxa weeyi ganacsiga, gargaarka iyo tamarta. Markii Midowgii Soofiyeeti burburay 1991-kii, Kuuriyada Woqooyi waxay habeen qudha wayday quwadii daba taagnayd, ilaa markaana ku tiirsanaanteeda Shiinuhu way sii kordhaysay ilaa xad ay maanta tahay dalka keliya ee ay xulufada yihiin.
Qiyaastii 80% shidaalka dalku isticmaalaa wuxu ka yimaad dalka ay dariska yihiin. Dhuxul dhagaxda Shiinaha uu u dhoofiyo ayaa iyadna aad muhiim ugu ah, waxase wiiqay oo joojiyey cunaqabatayntii lagu soo rogay bishii Juulaay ee sanadkii hore markii ay falal daandaansi ah ku kacday. Shiinuhuna wuu taageeray heshiiskaa cuno qabataynta lagu saaray kaas oo si baaxad leh u wiiqay sanadkii xigay ba dhaqaalaha Kuuriyada Woqooyi.
Waxyaabaha Kuuriyada Woqooyi dhoofiso gabi ahaantood ba waxa loo diraa Shiinaha ama waxay sii marisaa Shiinaha, ku dhawaad 90% gargaarka ay heshona waxa siiya Shiinaha. Dalka keliya ee isku socod xagga gaadiidka cirka iyo khadadka tareenada ah la lehina waa Shiinaha.
Ilaa badhtamihii sanadihii laba kumaadkii wuxu sidoo kale ahaa dalka keliya ee bankiyadiisu xidhiidhka la lahaayeen kuwa Kuuriyada Woqooyi, waxaanay lacagaha isku marin jireen xisaabo banki oo ku yaal jasiiradda Macau. Hase yeeshee lacagahaa waxa lagu xanibay cunaqabatayno hore.
Sidaas oo ay tahay, ayaa hadana meelaha cunoqabataynaha cusub ee Qaramada Midoobay ku soo rogtay lagu beegsanayo ay ka mid yihiin bankiyada Shiinaha, kuwaas oo ilaa haatan si dadban ula shaqeeya shirkadaha Woqooyiga Kuuriya ama kuwa ay sii maraan.
Qodobka ugu weyn ee Shiinaha siinaya gacanta sare marka laga hadlayo arimaha Kuuriyada Woqooyi waxa aad loo rumaysanyahay inuu yahay shidaalka uu siiyo oo hadii uu ka joojiyo degdeg saamayn dhaqaale oo taban ugu yeelanaya dalkaas.
Dhawr sano ka hor iyo mar kale oo dhawayd ayaa dhuumaha shidaalka u qaada Kuuriyada Woqooyi la xidhay markii cunaqabataynta lagu saaray tijaabadeedii hore ee nukliyeerka waxaanu Shiinuhu muujiyey cududiisa.
Laakiin in gebi ahaan ba la wada joojiyo shidaalka taga dalkaas, oo aan la yarayni, waa arrin gaar ah. waxaanan rumaysanahay in arintani xukuumadda dalkaas gelin doonto xiisad hor leh ama jilbaha u ridi doonta. Sababta oo ah Kuuriyada Woqooyi waxay marka horeba ku socotay dhaqaale af iyo gacan ah. Markaa hadii laga joojiyo ishan keliya ee dhaqaale waxay ku noqon doontaa mid dhabarka ka jabisa.
Waxa jira doodo adag oo taagan oo qaba in aan arintu sidaa u fududaan doonin. Kuuriyada Woqooyi waxay 25% ka mid ah wadarta guud ee dhaqaalaha dalka u qoondaysaa hawlaha milatariga. Kaydka shidaalka ah ee dalkaasina wuxu ku dhamaan doonaa dhawr bilood, waxaanay taasi keeni kartaa in ay qaado talaabooyin naf lacaari ah oo lagu hoobto oo ay ula kacdo dhanka koonfureed waana ta qof kastaa ka cabsi qabo in dalka Kuuriyada Koonfureed ee dadka tirada badani ku nool yihiin khasaare gaadhsiin karta.
Wuxu noqon doonaa hawlgal miidaame ah laakiin dunidu waxay dhaadantahay, maadaama kuwo hore loo soo joogay, in ay tahay caqabad weyn wax ka qabashada caqliyadda miidaamaha ah.
Sidoo kale Kuuriyada Woqooyi u hogaansami mayso wax kale maadaama oo ay burburayso. Qoxootiga ayaa raabe raabe uga tallaabi doona xadka Shiinaha waxaana dalka ka dhalan doona fawdo iyo kala dambayn la’aan. Shiinaha waxa soo food saari doona masiibadii ugu xumayd oo waxa dirqi ku noqon doonta in uu wax ka qabto mashaqo aan Maraykanka iyo xulufadiisu diyaar u ahayn in ay wax ka qabtaan.
Iyadoo ay jiraan dhamaan arimahaa muuqda ee Shiinaha gacanta sare siinaya marka laga hadlayo xiisadda Kuuriyada Woqooyi, ayaa ay jirtaa mid kale oo muhiim ahi waxaana weeyi iyadoo dunida inteeda kale la daalaa dhacayso wax ka qabashada colaadaha taagan, in Shiinaha quwadda badan isbidaya ay halis ku noqon karto oo ay wiiqi doonto habdhaqanka dalka yar ee faqiirka ah ee ay deriska yihiin oo maalin kasta daaha ka faydaysa karti darrada Shiinaha.
Waxa Qoray:Prof Kerry Brown oo ka tirsan Jaamacadda Kings College
Dawladda Turkiga oo qaadaysa tallaabo suuqa lagu dajinayo.
Beledweyne:-Shacabka Beledweyn Oo Kasoo Horjeestay Go'aanka Dawladda Somalia Ku Taageertay Sucuudiga.
09/08/2018 - 16:15:28
War Deg Deg Ah Dawladda Djibouti Oo Sheegtay In Nolosha Lagu Gubay 5 Ruux Oo Muwaadinteeda Ah Oo Diri-Dhaba Ku Sugnaa
Asmar:-Dawladda Itoobiya Iyo Jabhadda OLF Oo Heshiis Nabadeed Kala Saxeexday
08/08/2018 - 08:49:08
Qaramada Midoobay Oo Sheegay In Ay Kuuriyada Waqooyi sii waddo barnaamijka nukliyerka.
Hargeysa: Hay'adda Shaqaalaha Dawladda oo soo Bandhigtay Tirada Dadki mushaharka ku qaadan jiray magacyada Beenta ah iyo Tallaabada laga Qaaday
24/07/2018 - 21:17:22
Gudaha:-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas maalinimadii shalay shirka khudbad dheer ka jeediyey ayaa ka waramay.
17/07/2018 - 18:04:18
Hay'adda Shaqaalaha Dawladda Iyo Wasaaradda Waxbarasahda Somaliland Oo Wada Jir U Bilaabay Qorshe Looga-Gol Leeyahay Dib-U-Eegista Tiradda Iyo Tayada Macalimiinta Dawladda
15/07/2018 - 09:40:29
Liibiya:-Mucammar Qadaafi Kaalin Intee Le'eg Ayuu Ka Qaatay Xakamaynta Muhaajiriinta
08/07/2018 - 08:56:11
Hargaysa:-Khayraadka Wadanka Iyo Shaqadda Waddanka Inaan loo Sinayn Way Jirtaa...Cabdilaahi Jawaan
02/07/2018 - 16:12:03